Dhanka bulshada waa tan ugu muhiimsan uguna muhiimsan Apple Music | Wararka IPhone
El Adeegga muusikada ee qulqulaya ee Apple Waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay dhammaan bandhigyada tan iyo markii la bilaabay, iyo sharad ka timid Cupertino aad ayey ugu ballaaran tahay barnaamijkan. Sidaa darteed, iyo sidee bay noqon kartaa si kale, waxay iyaduna waqtigeeda ku soo qaadatay dhacdada maanta. Ma jiraan sheekooyin badan oo la soo bandhigay, laakiin shaki la'aan waxay u yimaadeen inay sii joogaan.
Ugu horreyntii, waa in la ogaadaa in Apple Music ay horeyba u gaadhay in ka badan 27 milyan oo macaamiil ah adduunka oo dhan, oo ah sawir xiddigiska. haddaan xisaabta ku darsanno cimriga yar adeegani laakiin taasi maaha wax badan markaan ka fikirno qadarka iphone-yada adduunka lagu iibiyo. Si kastaba ha noqotee, xogta ayaa jirta qof walbana wuu gaari karaa gunaanadkiisa.
Asal ahaan, ugubnimada ugu weyn ee Apple Music ayaa loo dhimay inay awood u leedahay inay la wadaagto asxaabta waxa aan dhageysaneyno, aragno waxa ay dhageysanayaan iyo helitaanka muusikada cusub. Runtu waxay tahay in noocyada barnaamijyadan farqiga u dhexeeya horumarka uusan u weyneyn sida kuwa kale, laakiin dhab ahaan Uma muuqato in warka uu ku xiran yahay waxa laga filan karo Apple at WWDC ah.
Sikastaba, iyo sida iska cad, waxaa jira waxyaabo isbadalaya inta udhaxeysa hada ilaa iyo bisha Sebtember, marka aan lakulmeyno iPhones-ka cusub, marka waxaan arki karnaa qaar kamid ah kudarista barnaamijka qulqulka muusikada ee Apple. Dabcan, ma-guurto ma aha ikhtiyaar suuq sii kordheysa oo dagaal badan oo macaamiisha ay ku yartahay jahwareerkooda ku saabsan ka beddelka hal madal oo kale haddii xaaladuhu si aad ah uga fiican yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Apple Music hadda waa ka bulsho badan tahay sidii hore
AirPlay 2 oo ah dhammaystirka HomeKit ee iOS 11